विराटनगर, १४ असोज । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत कोरोना भाइरस संक्रमित एक पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
विराटनगरको गोल्डेन अस्पतालबाट थप उपचारका लागि रेफर गरिएका सप्तरीको राजविराज–४ का ३९ वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान ३ः१० बजेतिर मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताए । उनका अनुसार ज्वरो, खोकी, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि गोल्डेनले थप उपचारका लागि रेफर गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा असोज ९ गते कोरोना पुष्टि भएपछि उनलाई थप उपचारका लागि भोलिपल्ट कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको डा. सापकोटाको भनाइ छ । भेन्टिलेटरमा राखेर उनको उपचार हुँदै आएको थियो । मृतकमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मृगौला सम्बन्धी पुरानै समस्या रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको । डा. सापकोटाका अनुसार १० वर्षदेखि मधुमेहको समस्या रहेका उनले मृगौलाको नियमित डाइलासिस पनि गराउँदै आएको खुलेको छ ।